Global Voices teny Malagasy » Miserasera aterineto any amin’ny toerana ho an’ny daholobe ao Kiobà · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Septambra 2015 4:30 GMT 1	 · Mpanoratra Elaine Díaz Nandika (en) i Marianna Breytman, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Kiobà, Mediam-bahoaka, Teknolojia, GV Mpisolovava
Amin'ny 10 ora alina fa toy ny hipoaka ao amin'ny zaridaina Agramonte, ao afovoan-tanàna Kiobàna ao Camagüey . Feno olona mifantoka mafy amin'ny efijery fotsy manazava ny aizina noho tsy fisian'ny jiro an-dalambe ao an-jaridaina. Tsy ampy ho an'ny rehetra ire dabilio rehefa alina. Mandritra ny andro, mandoro ireo izay mba te hiditra aterineto ao ny masoandro. Raha te-hipetraka any anaty fisotroana kafe mahazo Wifi ianao dia tsy maintsy mividy zavatra sy mandoa vola amin'izany.
Raha hampiasa aterineto ao Kiobà, dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny kaonty ao amin'ny ETECSA , renin'ny orinasam-pifandraisandavitra rehetra ao amin'ny firenena ianao. Misy fomba roa ahazoana miditra amin'ny kaonty: afaka mividy karatra famahanana Nauta  ianao, na mahazo fifanarahana amin'ny ETECSA ahitana fiseraserana aterineto sy mailaka. Amin'ireo fomba roa ireo, angatahana ianao mba hampiseho ny mombamomba anao manokana ofisialy nomen'ny fanjakana, na karapanondro izany na pasipaoro.
Amin'izao fotoana izao, miaina aterineto mitsitapitapy ny Kiobàna. Lafo loatra sy lany vetivety. Fampiasam-bola manokana, ary tsy maintsy mitondra tombontsoa sahaza hoan'ireo manao azy. Dokambarotra marobe no alefa ao amin'ny Revolico  (tranokalam-barotra tsy ofisialy ao Kiobà, mitovy amin'ny craigslist) izay manome servisy fitantanana kaonty Facebook manokana. “Misy lehilahy iray monina eo akaikin'ny tranoko izay mitantana kaontin'ankizivavy telo manana vahiny mpifanoratra amin'izy ireo. Mamaly ny hafatra ru zavavy dia ralehilahy no mandefa izany” hoy ilay mpiserasera tsy te-ho fantatra tamiko.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/18/74204/
 karatra famahanana Nauta: http://www.etecsa.cu/?page=internet_conectividad&sub=internet